राजपाले प्रधानमंत्री ओलीसंग चार मंत्री र उपसभामुख मागेको खुलासा, ओलीले के भने ? - Yatra Daily
Home राजनीति राजपाले प्रधानमंत्री ओलीसंग चार मंत्री र उपसभामुख मागेको खुलासा, ओलीले के भने...
राजपाले प्रधानमंत्री ओलीसंग चार मंत्री र उपसभामुख मागेको खुलासा, ओलीले के भने ?
वीरगन्ज २४ माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी यतिवेला भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् । दिल्ली उड्नुअघि उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा महतो र भण्डारीलाई आफूहरलाई चार मन्त्रालय र उपसभामुख दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि हालतमा आफूले चार मन्त्रालय दिन नसक्ने अडान लिएका थिए ।
नेकपा निकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘राजपाले चार वटा मन्त्रालय मागेको छ । उपसभामुख पनि दिनुपर्छ भनेर उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्रालय र उपसभामुख मात्रै दिन सकिने लचकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अहिले कतिवटा मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन् ।’
Previous articleवीरगंजबाट प्रकासित पर्दाफास दैनिक पत्रिकाकाे नवौं वार्षिकाेत्सव सम्पन्न
Next articleनेवि संघद्वारा रजिष्ट्रार दहाललाई ३ बुंदे ज्ञापन, माग पुरा नभए आन्दाेलन गर्ने चेतावनी